नेकपाको ‘किचलो’ र शिवमायाको ‘जब्बर’ अडान ! | Ratopati
संसद बन्यो बन्धक
नेकपाको ‘किचलो’ र शिवमायाको ‘जब्बर’ अडान !
शिवमायाले राजीनामा दिने कि नेकपाले निर्णय फेर्ने ?
personफणिन्द्र नेपाल exploreकाठमाडौं access_timeपुस ११, २०७६ chat_bubble_outline5
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल (नेकपा)भित्रको आन्तरिक ‘किचलो’ र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको ‘जब्बर’ अडानका कारण प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन बनेको तीन महिना बित्न लागेको छ ।
शुक्रबारका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएपनि उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले राजीनामा नगरेपछि सूचना टाँसेर ५ दिनको लागि स्थगित गरिएको छ ।
जसका कारण जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद् नै लामो समय बन्धक जस्तै बन्न पुगेको छ ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार प्रयासमा मुछिएपछि गत असोज १४ यता प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहिन छ ।
जतिबेला संसद नबसेको अवस्था थियो । जब पुस ४ गतेबाट संसद बैठक सुरु भयो, तब सभामुख चयनको विषय पहिलो प्राथमिकतामा पर्न गयो ।
यो बीचमा उपसभामुख शिवमायालाई राजीनामा गर्न लगाउने र सभामुख÷उपसभामुख दुवैको निर्वाचन गर्ने तयारी भएको थियो । उक्त तयारी अनुसार सभामुख पद सत्तारुढ दल नेकपाले लिने र उपसभामुख अन्य दललाई दिने आन्तरिक सहमति समेत भएको थियो ।
नेकापाका नेता तथा प्रमुख सचेतक देव गुरुङका अनुसार सोही अनुरुप पुस ४ गते ११ पुसमा बस्ने गरी संसद बैठक स्थगित गरिएको हो ।
यसबीचमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गर्ने र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै पदमा निर्वाचन गर्ने संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी अगाडि बढाएको थियो । त्यसैअनुसार पुस ११ गतेका लागि बोलाइएको बैठकमा सम्भावित पहिलो कार्यसूची नै सभामुख चयन प्रक्रियालाई बनाइएको थियो ।
तर, नेकपा र संसद सचिवालयको योजना विपरित उपसभामुख तुम्वाहाङ्फेले राजीनामा नदिएपछि पुन ५ दिनपछि संसद बैठक बस्ने गरी स्थगित गरियो ।
‘शुक्रबारसम्म उपसभामुखको राजीनामा आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर आएन । राजीनामा नआउँदा सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन संसद सचिवालयलाई अप्ठ्यारो भयो’, संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको राजीनामा आएपछि ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने र निर्वाचन प्रक्रियामा जाने तयारी अवरुद्ध हुन पुग्यो । जसले बैठक नै स्थगित गर्नुपर्यो ।’
शुक्रबार बिहानसम्म राजीनामा दिने ‘मुड’ बनाएकी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पार्टीको निर्णय नआएको भन्दै आफ्नो पूर्ववत निर्णय परिवर्तन गर्नुपरेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । तुम्वाहाङ्फेले आफू नै सभामुखका लागि सक्षम र उपयुक्त पात्र दाबी गर्दै आएकी छन् ।
उनले भन्ने गरेकी छन्, ‘कृष्णबहादुर महराले गल्ती गर्ने किन म त्यसको भागीदार बन्नुपर्ने ? कि मलाई सभामुखका लागि यो कारणले असक्षम भनिदिनुपर्यो ।’ ‘सभामुख चयनमा म बाधक छैन । राजीनामा दिन तयार भएर बसेको छु । आजको बैठक स्थगनमा मेरो राजीनामा कारक होइन,’ उपसभामुखले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भनिन् ।
तर, उनको दावीलाई नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । सभामुखका लागि असक्षम भनेर कुनै कारण समेत प्रस्तुत गर्न सकेको छैनन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली शिवमायालाई सभामुख बनाउनुको साटो पूर्व संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई र अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहान्छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले तुम्वाहाङ्फेलाई राजीनामा गरेर सहज वाताबरण बनाउन आग्रह गरिसकेका छन् ।
तर, उनले त्यसको विकल्पमा कि आफूलाई नै सभामुखको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कि उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै आएकी छन् ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउँदा राम्रो सन्देश जाने भन्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेताहरुलाई सन्देश पठाइसकेकी छन् । राष्ट्रपतिको समेत यस्तो ‘सिग्नल’ पाएपछि राजीनामा दिने तयारीमा रहेकी तुम्बाहाङ्फले एकाएक आफ्नो निर्णय नै परिवर्तन गरेको बताइन्छ ।
‘शिवमायाको आशयमा नेकपाका शीर्ष नेतृत्वले कुनै भरपर्दो सङ्केत दिन सकेको छैनन् । ‘राजीनामा दिन मात्र भनिएको छ । त्यसपछि के भन्ने निश्चित छैन । अनि कसरी दिने ?’ तुम्वाहाङफे निकट स्रोतले भन्यो ।
उता, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउँदा राम्रो सन्देश जाने भन्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेताहरुलाई सन्देश पठाइसकेकी छन् । राष्ट्रपतिको समेत यस्तो ‘सिग्नल’ पाएपछि राजीनामा दिने तयारीमा रहेकी तुम्बाहाङ्फले एकाएक आफ्नो निर्णय नै परिवर्तन गरेको बताइन्छ ।
पार्टीको ह्वीप पनि नलाग्ने
सभामुख चयन प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि थप जटिल पनि बन्दै गएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार एमालेका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी थिइन शिवमाया ।
तर, अहिले दुवै पार्टी एकता गरेर नेकपा भैसकेको छ । सभामुख र उपसभामुख कुनैपनि पार्टीको नहुने भएकाले उनलाई पार्टीको ह्वीप लगाउन पनि मिल्दैन । जसका कारण उनले अनेक बहाना देखाएर समय लम्ब्याउन सक्नेछिन् ।
यस्तो अवस्थामा उपाय के त ?
नेकपाका नेताहरुकाअनुसार अबको विकल्प भनेको नै कि उपसभामुख शिवमायाले राजीनामा गर्ने कि त नेकपाले निर्णय परिवर्तन गर्ने हो ।
शिवमायाले राजीनामा नगर्दा सभामुखको मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा उपसभामुख शिवमाया नै भएर सभामुख अरु दललाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर यो विकल्पमा नेताहरु जान तयार छैनन् ।
किनभने संसदको ठूलो दल नेकपाले सभामुख अरु दललाई दिन चाहेको छैन । त्यसमा पनि शीर्ष नेता अनुकुलको व्यक्ति नै सभामुखमा ल्याउनुपर्ने अडानमा नेताहरु छन् ।
महाअभियोगको सम्भावना कति ?
नेकपाका नेता तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ
संसदमा नेकपाको स्पस्ट बहुमत छ । यस्तो बेलामा नेकपाले शिवमायालाई हटाउनै चाहे महाअभियोग लगाएर पनि हटाउन सक्छ । त्यसका लागि कुनै अभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, कार्यक्षमता अभाव देखाएर महाअभियोग लगाउन पनि नेकपालाई सजिलो छैन । यसअघि कार्यक्षमता सन्तोषजनक देखेको नेकपाले अहिले कार्यक्षमता कमजोर भनेर पुष्टि गर्न सक्ने आधार पनि छैन ।
यद्यपी, त्यो विकल्प नेकपाले सोचिनसकेको बताएको छ । नेकपाका नेता तथा प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘ती कुनैपनि विकल्पमा जानु नपर्ने भन्दै शिवमायाले एकसय एक प्रतिशत राजीनामा दिने’ दावी गर्छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उहाँ (उपसभामुख) ले एकसय एक प्रतिशत राजीनामा दिनुहुन्छ । अरु कुनै विकल्प र निर्णय गरिरहनुपर्दैन ।’
#शिवमाया तुम्बाहाङ्फे#कृष्णबहादुर महरा
Dec. 28, 2019, 8:37 a.m. raj
Rajinama dine ani pheri upasabhamukh banaye bhai gayoni.
Dec. 28, 2019, 7:41 a.m. Udaya Pradhan
Shivamaya jiu Savasadko mukhya dabedar hunuhunchha sathai 101 % sakxam hunuhunchha. Wahannai nai savasadko most potential candidate hunuhunchha hunchha.
Dec. 28, 2019, 5:32 a.m. गणेश कुमार लिम्बु
शिवमायाको अडान शत प्रतिशत सही छ । नेकपाका नेताहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई दास भन्दा तल्लो स्तरको ब्यवहार गर्दै आईरह्को अवस्थामा ( गोकर्ण बिष्ट र लालबाबु पण्डित ) निजको कुनै गल्ती न रहेको अवस्थामा किन राजिनामा गर्ने ? कि त बिकल्प को ग्यारेन्टी दिन सक्नु पर्यो दुवै अध्यक्षले बिकल्प पनि न दिने जमिन्दारी शैलीमा राजिनामा दे भनेर उर्दी दिने यो त एक सक्षम महिला नेतृ माथी हेपाहा प्रवृती देखाएको हैन र ?
Dec. 27, 2019, 8:42 p.m. लिला नाथ पगेनि
अहिले कै उपसभामुख लाई सभामुख बनाउनु पर्दछ।बामे दाजुभाइ हरु।
Dec. 27, 2019, 8:41 p.m. Binod Dhakal
शिवमायालाई सभामुख बनाउनु नै सबै भन्दा उपयुक्त हुन्छ , ठुल्ठुला नेता गण दुखि भए पनि देश र जनता धेरै खुशी हुने छन् । अन्तरास्ट्र मा पनि नेपालको राम्रो नाम र प्रचार जान्छ । अझ भन्ने हो भने नीतिगत भ्रस्टाचार गर्ने हरुलाई उहाँले केहि रोक्नु सक्नु हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको सुझाव: राजनीतिक पार्टी र विज्ञहरुको बैठक बोलाउ
सरकारको निर्णय : आइसोलेसन सेन्टरलाई कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गर्नेदेखि शवदाह गृह थप्नेसम्म